MacOS Big Sur 11.3 RC, dib u eegista AirTags iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican waxaan ka imid Mac | Waxaan ka socdaa mac
Toddobaadkan wuxuu fure u ahaa dad badan oo adeegsada Apple iyo shirkadda Cupertino lafteeda. Imaatinka iMac-ka cusub oo wata naqshad cusub, processor-ka Apple M1, shaashad fiican iyo ugu dambeyn iMac gebi ahaanba la dayactiray ayaa fure u ahaa dhacdadii 20-kii Abriil. Waxaa weheliya iMac-kan cusub AirTags cusub, Apple TV 4K iyo iPhone 12 oo midabkiisu yahay buluug, sacab muggiis oo wanaagsan oo qalab iyo alaab ah oo hubaal ay jeclaan doonaan adeegsadayaasha Apple.
Laakiin marka lagu daro soo bandhigida Apple waxaan ku helnay war muhiim ah dunida Apple. Taasi waa sababta maanta oo Axad ah aan u arki doonno qaar ka mid ah wararkan ugu caansan ee aan ka imid Mac. Waxaan ka bilaabaynaa macOS Bic Sur 11.3 RC sii deynta nooca. Taas macnaheedu waa in usbuuca soo socda waxaan lahaan doonnaa nuqulkii ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka Mac.
Marka lagu daro loolanka Maalinta Dunida, Apple sidoo kale waxay ku iftiimisay degelkeeda ballanqaadka ay la leeyihiin deegaanka iyo dhulkeenna. Apple wuxuu sii wadaa inuu la dagaallamo si looga takhaluso saameynta deegaanka intii suurtagal ah taas oo ku lug leh soo saarista qalabka, soo saarista xarunta xogta, waxayna rabtaa iibiyeyaashu inay ku soo biiraan ballanqaadkooda.
Sidee bay noqon kartaa haddii kale, qaar ka mid ah kuwa ugu caansan ee YouTuber goobta ayaa sii daayay dib u eegista muujineysa AirTags, shaqadooda iyo iPhone 12 oo midabkiisu yahay guduud. Haatan, inteena kale ee aadanuhu waa inaan sugno imaatinka, qaar badan oo naga mid ah ayaa qaabili doona 30ka Abriil, Oo adigu ma weydiisatay iyaga?
Kuwa isticmaala ee doonaya inay ku iibsadaan iMac muraayadda nano-textured taas way ogtahay Apple waxay ka sameysay qiimo dhimis ku dhow € 300. Waxaan imanayaa saacado kadib soo bandhigida iMac cusub iyo kiiskan Kuwani waa moodelladii hore ee 27-inji ahaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » MacOS Big Sur 11.3 RC, dib u eegista AirTags iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
1.500 bilyan oo qalab Apple ah ayaa wali u nugul sababo la xiriira AirDrop